Ambanja : tafidina 700 Ar ny kilaon’ny cacao | NewsMada
Ambanja : tafidina 700 Ar ny kilaon’ny cacao
Mizaka ny vokatry ny fidinan’ny vidin’ny cacao ny tantsaha any Ambanja. Manimba ny kalitao koa ny fiovaovan’ny toetr’andro, mampiteraka aretina ny hazo cacao, ka ilaina ny karazany vaovao.
Nisy loabary an-dasy nandinihana ny zava-misy mikasika ny lalam-pihariana cacao tany Ambanja, faritra Sava, ny alakamisy teo. Marihina fa foiben’ity vokatra fanondrana any ivelany ity any an-toerana. Fantatra fa nilatsaka izaitsizy ny vidin’ny cacao eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, tafidina 1.800 dolara ny taonina, ary 6.000 Ar ny kilao. Any Ambanja, zara raha amidy 700 Ar ny kilaon’ny cacao voavaofy (nesorina ny hodiny). Nilaza ny mpandraharaha amin’ity lalam-pihariana ity, Ranaivosoa Eric, fa “tena mizaka ny vokatr’izao fihenam-bidy izao ny tantsaha mpamokatra”.
Hany vahaolana hitan’ny mpamboly any Ambanja ny manao fambolena hafa, toy ny patchouli, ny sakamalaho, ny curcuma, voly fakana ilomenaka. “Tsara vidy ireo vokatra ireo satria mety hahazoana tombombarotra hatrany amin’ny 4.000 dolara”, hoy ihany ity mpandraharaha ity.
Karazana cacao vaovao
Antony faharoa manaratsy ny vokatra cacao koa ny fiovaovan’ny toetr’andro ankehitriny. Misy bibikely manimba ny hazo ary mamono azy ireo mihitsy. “Ahina ho ringana mihitsy ny voly cacao manontolo raha tsy misy ny fepetra haingana”, hoy ny fikambanana ONG Sôrogno. Nandroso tetikasa hambolena karazam-boly cacao vaovao, tsara kalitao any amin’ny fandaharanasa Pic II ny teknisianina. Kely ny vokatra cacao, manodidina ny 7.500 t ny taona 2015. Na lazaina aza fa anisan’ny tsara indrindra maneran-tany ny cacao avy any Ambanja, sakana tsy ahazoana ny kalitao tsara ny fahanteran’ny foto-kazo sy ny tsy fanaraham-penitra mandritra ny fiotazana. Eo am-pikarohana karazana cacao sahaza any an-toerana ny Foibem-pikarohana mikasika ny fambolena (Fofifa). Mahatratra 24 ny kazarana zana-kazo metisy hitan’izy ireo, hanaovana fanandramana any an-toerana, tohanan’ny fandaharanasa Pic II. Voalaza fa mahazaka tsara ny toe-tany any Ambanja sy ny manodidina izy ireo.